Shahwada/biyaha raggu dumarka faa'iido caafimaad ma u leedahay? | Raganimo University
Galmada & Raaxada
Jaceylka & Guurka
Shahwada/biyaha raggu dumarka faa'iido caafimaad ma u leedahay?
March 10, 2020~1 minute
Dad badan ayaa aaminsan in shahwada ragu ay faa'iido caafimaad u leedahay dumarka. Haddaba maxaa ka jira arintaas? Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in shahwadu ay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo dhowr ah. Qaasatan waxaa la ogaaday in shahwadu ay hoos u dhigto cudurka niyad-jabka (depression) iyo walaaca (anxiety).
Intaa waxaa dheer in la sheegay in ay ku jidho vitamins kuwaasoo u fiican ilkaha, timaha iyo makhaarka. Sababtaas ayaa dumar badan oo cadaan ah ay jecelyihiin in ninkooda marka uu biyo-baxayo uu korkooda ku biyo-baxo si ay isku mariyaan shahwada. Sidoo kale waxaan ognahay in guud ahaan galmada ay caafimaad leedahay isla markaana ay kordhiso farxada.
Balse shahwadu qasaaro wey leedahay. Dumarka qaar ayaa xasaasiyad ku qaba shahwada iyagoo ku xanuunsan kara, qaasatan haddii ay taabato maqaarkooda. Waxaa sidoo kale qatar ah haddii ninku uu qabo cudurada laga qaado galmada nuucyada kala duwan.
Laakiin ugu dambeyn haddii lamaanaha ay yihiin kuwo iska ilaalinaya uurka oo aan dooneyn in ninku uu ku biyo-baxo gabadha gudaheeda. Waxay sameyn karaan in uu dibada ku biyo-baxo.